> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan iyo Guba Android Video inay DVD
Android iyo aad u badan oo caan ah adduunka oo dhan waa. Waa nidaam mobile hawlgalka ay leedahay Google. Telefoonada Android yihiin sida caadiga ah aan pricy, customizable, rootable iyo faa'iido ugu muhiimsan waa xoriyadda. Sidaas ma weyn lama filaan ah, waxaad si fudud u qabsan kartaa video la telefoonada Android oo si fudud lagu wareejiyo si aad u computer u tafatirka, qaybsiga, ama gubasho in DVD la jecel aad DVD gubanaya software.
Aragti ahaan, dhammaan taleefanada Android waxaa taageera si ay u gudbiyaan video in computer iyo gubi in DVD DVD la socon kara software gubanaya, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn, kuwaas Android telefoonada: HTC Evo 3D, HTC Rezound, Huawei kori P1 S, Huawei Honor, LG Prada 3.0 , Motorola, car, mini, Motorola Droid Bionic, Motorola Droid Razr, raaxo Motorola Moto, Samsung Epic Touch 4G, Samsung Galaxy Ace Plus, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy S II (AT & T), Samsung Galaxy S II (T-Mobile), Sony Xperia S ...
Maqaalkani waxa uu ku tusi doona sida loo video ka Android wareejiyo computer iyo gubi Android videos in DVD isticmaalaya Wondershare DVD Creator ( DVD Creator for Mac ) waqti iyo dhibaatana yar. Free download version maxkamad ay halkan.
Sida loo Guba Android Videos in DVD ku qasabno
Tallaabada 1. Import Android mashruuca gubanaya DVD
Ka dib markii ay ku rakibidda Android inay DVD Converter, waxaa lagu daahfuri oo guji "Import" in ay dajiyaan Android videos si loo ururin. Kaliya hubso in Android video size kama badna line cas hoose ee daaqadaha hoose. Haddii ay dhacdo, waxaad bedeli kartaa in DVD-R 9.0G ama meesha laga saaro Android videos. Android Tani inay sidoo kale DVD Creator kuu ogolaanaya in aad xaalkaa videos, ay ka mid yihiin, kuwaas oo qalab: Dalag, goo, isku beddesha, Watermark, Raadka, iwm
Haddii aad qabto taxane ah oo Android videos, waxaad ku kala qaybin karaa dhawr cutub adigoo gujinaya ah "Add horyaalka" button iyo dar aad Android videos, xad ma laha halkaan.
Tallaabada 2. Author Android DVD menu (optional)
An Android DVD menu waa mid wax tar leh haddii aad leedahay badan oo videos on disc DVD ah. Qoraaga DVD menu ah, u tag "Menu" tab. Waxaa jira tiro balaadhan oo ah Hababka ee la dhisay-in menu marto, loox iyo badhamada Doorashadaada. Ka dib markii xulashada template menu ah, waxa kale oo aad ku dari kartaa qoraalka, music asalka iyo asalka images qorayaasha menu ah DVD qurux badan, oo ku saabsan cutubyada oo dhan loo soo bandhigi doono sida thumbnails.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo Android gubi in DVD
Haddaba tag, si ay "Kulanka Xiisaha Leh" tab in ay qaataan bidhaamaysa ee DVD video Android aad disc. Haddii aan waxba loo baahan yahay in wax laga beddelo, tag "Guba" tab loo sameeyo goobaha sida calaamadda disc, bartilmaameedka wax soo saarka, heerka TV, muuqa iyo DVD drive (haddii aad leedahay badan DVD drives). Ugu dambeyntii, guji "Start" iyo barnaamijka si toos ah u gubi doonaa Android video inay DVD. Marka Android inay DVD qoraal dhameystiran, DVD disc ee Android tuurid si toos ah
Qabtay. Just geliso Android DVD disc galay aad DVD ciyaaryahan guriga si aad u daawato Android videos on TV. Ka sokow Android gubanaya si DVD la dhisay-in engine DVD gubanaya, waxa kale oo aad u bedeli karaan Android inay folder DVD, image ISO ay gubaan DVD disc la DVD kale software olol ah sida Nero.
Talooyin: Sida loo Video ka Android wareejiyo Computer
Connect aad Android inay computer la cable USB, iyo telefoonka aad Android lagu ogaan doonaa sida qalab USB ah. Markaas content ku qoran kaadhka SD oo dhan waxaa laga heli karaa My Computer ee Windows ama Desktop ee Mac, oo ay ku jiraan video Android duubay. Folder caga sida caadiga ah waa DCIM / Camera. Markaas nuqul oo paste Android video files si aad u computer.
Ogsoonow in telefoonada Android kala duwan qabsan doonaan videos qaabab kala duwan. The qaabab weel caan ah oo Android video ka mid ah 3GP, MP4, M4V, MOV, TS, MKV, WebM, iwm
Hel Video Best The Player inay Play Video ku Android